'Jaguar' - Iyo nyowani nyowani yeSpanish inouya kuNetflix | Bezzia
'Jaguar': Iyo nyowani nyowani yeSpanish inouya kuNetflix
Susana godoy | 31/08/2021 14:00 | Nhau
Zvinotaridza kuti chikuva cheNetflix chinoramba chiri chimwe chemapuratifomu anonyanya kuzivikanwa ekutanga kweakateedzana. Naizvozvo, hazvishamise kuti ma greats anobva munyika ye cinema kana iyo skrini inoda kuve mune yayo katarogu. Mune ino kesi kubheja kunouya kubva nyowani Spanish dzakateedzana uye yakanzi 'Jaguar'.
Chokwadi patinokuudza Ndivanaani protagonists uye yakakwana cast, iwe unoda kuti iburitswe nekukurumidza sezvazvinogona. Iwe unofanirwa kumirira zvishoma, asi ndiwo chete mazuva anotiparadzanisa kubva kune imwe yemazano makuru iwe aunogona kunakidzwa zvakanaka kubva kumba kwako. Wakagadzirira kuziva zvishoma?
1 Mushure mekubudirira kwe 'Las chicas del cable', Ramón Campos anodzoka kubheja zvakaoma
2 Ndeapi mavara achave chikamu che 'Jaguar'
3 Chii chinonzi 'Jaguar' nezve?
4 Inotanga riini?
Mushure mekubudirira kwe 'Las chicas del cable', Ramón Campos anodzoka kubheja zvakaoma
Hongu, zvinofanirwa kutaurwa izvozvo kubudirira kwe 'Cable Vasikana' papuratifomu yeNetflix chave chiri chimwe chezvakanyanya kukosha. Pamusoro pekuva imwe yekutanga fikisheni dzeSpanish kusvika pakakwirira kudaro. Zvakanaka, kuseri kwezvose izvo zvigadzirwa ndiRamón Campos, uye kwete, yanga isiri iyo chete chirongwa. Nekuti akavamba kambani yekugadzira Bambú muna 2007, pamwe naTeresa Fernández. Vaviri vakatanga kuburitsa hits pachiratidziro chidiki icho isu tese chatinorangarira sa'Gran Reserva ',' Gran Hotel ',' Fariña ', pakati pemamwe mazita mazhinji. Nekudaro, hazvishamise kuti izvozvi na 'Jaguar' anodzokorora kubudirira ikoko zvakare. Tichaziva munguva pfupi!
Ndeapi mavara achave chikamu che 'Jaguar'
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa kumeso kweterevhizheni ndeye Blanca Suarez. Zvakare nyeredzi mu 'Las chicas del cable' uye zvinoita sekunge achadzokorora neiyi nyowani nhevedzano. Iye achave ari pamusoro pehunhu hwake, anova Isabel Garrido. Asi padhuze naye, pachavewo naIván Marcos watakaona akateedzana senge '45 kumukira 'kana zvekare yatakambotaura,' Fariña 'uye hunhu hwaLucena hunotamba.
Kune rimwe divi isu tinofanirwawo kutaura Adrian Lastra, watakaona panguva iyoyo mune akateedzana 'Velvet', ichitora kutarisisa kwevanhu vese. Zvakanaka, mu 'Jaguar' ichave Matsi. Oscar Casas Achavewo padivi paBlanca kuti ape hupenyu hunhu hwaCastro. Zvinotaridza kuti hama dzeCasas dzinokohwa kubudirira kwakawanda muhupenyu hwavo hwehunyanzvi uye mushure maMario, arscar anosvikawo achikanyaira. Chekupedzisira asi chisiri chidiki isu tinowana Francesc Garrido. Rimwe remazita akakosha munyika medu, ane mibairo yakakosha uye anoshanda zvese mufirimu uye muterevhizheni kana theatre.
Chii chinonzi 'Jaguar' nezve?
Zvino zvatave kuziva kuti ndiani ari pamusoro pechigadzirwa uye ivo vanopesana nazvo, isu tinongofanirwa kuziva kuti ino nhevedzano nyowani ndeyei. Kutaura kunoitwa hupenyu hwaIsabel, mukadzi wechidiki anopona mumusasa wevasungwa weNazi. Kutsunga kwake kutsvaga mumwe wevarume vane ngozi kwazvo panguva yacho. Naizvozvo, paanotanga kuongorora, iye anozoona kuti kune vamwe vakaita saiye vanouya kuzotsvaga kururamisira. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti akateedzana akaiswa mune imwe nguva, ichave iri muma60. Nekudaro, isu tichaona zviitiko uye nguva dzekurangarira uye nhoroondo. Pasina kupokana, ivo vatove zvinopfuura zvinokurudzira kuti vakwanise kukochekera pairi.
Isu hatisi kutaura nezve chirongwa cherefu-nguva sezvazvinowanzoitika. Asi mumazuva mashoma tichava nayo paNetflix. 'Jaguar' inotanga munaGunyana 22. Saka pane zvishoma zvekumirira zvatinofanira kutsungirira. Mazuva ndeechokwadi kuenda nekukurumidza kupfuura zvatinofunga! Ichave iyo yeayo iwe aunonyora pasi pane yako yekuda runyorwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » 'Jaguar': Iyo nyowani nyowani yeSpanish inouya kuNetflix
H & M Mabhasikiti emumba nemabhokisi ekurongedza kicheni